Depeche Mode kick off tour Wednesday, 25th May 2016 HomeNewsLocalRegionalMandalayCrime N' AccidentPoliticalTipsArticlePerspectiveForeign_AffairVideoList ViewSocietySportsWorld Cup Special2015 Election
Published: May-15-2016 ပြည်သူအများစုက စာဆိုတော်ကြီး မင်းသုဝဏ်၏ သား ဒလဘန်း အမည်ရ သမ္မတ ဦးထင်ကျော်ကို လေးစားသည့်တိုင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာ အစိုးရခေါင်းဆောင် နိုင်ငံ့အထွတ်အထိပ်ဟု မှတ်ယူထားသည်။ အခြေခံဥပဒေအရ ကန့်သတ်ချက်များ ရှိနေသော်လည်း အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အရယူထားပြီး ဥပဒေပြုရေး အာဏာပိုင်ရှင် လွှတ်တော်ကိုလည်း လက်ရုံး...
| Read More >> ချစ်လူမိုက်များ အလိုမရှိ
ချစ်သူချင်း အဆင်မပြေခြင်း၊ ချစ်သူအသစ်ရှာခြင်း၊ ချစ်ခွင့်ပန်သည်ကို လက်မခံသည်ဟုဆိုသော အကြောင်းပြချက် အမျိုးမျိုးဖြင့် ဓား၊ ကတ်ကြေးဖြင့် ထိုးမှုများမှာ လူစည်ကားရာ တော်ဝင်စင်တာ၊ ဒဂုံစင်တာနှင့် ရန်ကင်း...
ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုရှင် ဒေါက်တာသန်းမင်းထွဋ်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
“အခက်အခဲကတော့ အများကြီး ကြုံတာပေါ့။ ဘယ်လိုကျော်သလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော့်နည်းကတော့ သစ္စာဆိုတယ်ဗျ”...
သမ္မတရုံး ဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
“ပြောရရင် မီးစတစ်ဖက် ရေမှုတ်တစ်ဖက်ပေါ့”...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အကူအညီ လိုအပ်လျှင်ဖြစ်စေ၊ သတင်းပေး..
ထိုင်းနိုင်ငံ လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုတွင် သေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသည့် မြန်မာနှစ်ဦး...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘင်္ဂါလီ အရေးကြောင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ယိမ်းယိုင်သည့် အဆင့်အထိ...
အီလက်ထရောနစ်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) ဖြင့် တရားစွဲ...
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ...
ရန်ကုန်မြို့တွင်း ခရီးသည်တင်ယာဉ်လိုင်း ၃၀၀ ကျော် ဖျက်သိမ်းမည်
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ပြေးဆွဲနေ သည့် မထသ (ဗဟို) ကော်မတီအောက်...
Editorial ကမ္ဘာကြီး၏ လားရာအသစ် ဖြစ်လာသော အာရှဒေသ၏ အလားအလာရှိသော အရှေ့တောင်အာရှမှ ထွန်းသစ်စ မြန်မာနိုင်ငံသည် အမေရိကန်နှင့် တရုတ်အကြား ဒုတိယ စစ်အေးသဖွယ် ပြိုင်ဆိုင်မှု၊ သြဇာလွှမ်းမိုးရန် အပြိုင်ကြိုးစားမှု၊ စီးပွားရေးဈေးကွက် ချဲ့ထွင်လိုသော ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် အငြင်းပွားဖွယ်၊ ဆန်းစစ်သုံးသပ်ဖွယ် စင်ကာပူ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒတို့သည် မြန်မာအစိုးရသစ်ကို သတိသွေးတိုးစမ်းလာဖွယ်...
Read more...	no frame support Our Job partner jobless.com.mm FOREIGN AFFAIR Search RSS More Cat
ထိုင်းစာသင်ကျောင်း တစ်ခု မီးလောင်ကျွမ်း၊ ကျောင်းသူ ၁၇ ဦးခန့် သေဆုံး
ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ချင်းရိုင်မြို့ရှိ စာသင်ကျောင်း အဆောင်တစ်ခုတွင် မီးလောင်ကျွမ်းမှုတစ်ရပ်...
Published: 05-24-16 အစ္စလာမ် ဥပုသ်လအတွင်း အနောက်အုပ်စု ပစ်မှတ်များကို တိုက်ခိုက်ကြရန် IS အဖွဲ့ လှုံ့ဆော်
Published: 05-23-16 သြစတြီးယား ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဥရောပ၏ ပထမဆုံး လက်ယာစွန်း သမ္မတ ပေါ်ထွက်လာနိုင်
Published: 05-23-16 သေနတ်ကင်းလွတ်ဇုန်များကို ဖယ်ရှားပစ်မည်ဟု ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဆို
Published: 05-22-16 PERSPECTIVE Search RSS More Cat
ရက် ၁၀၀ ၅၀ သား အစိုးရ
ရက် ၁၀၀ အတွင်း ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများသည် Public Relations ခေါ် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး အလေးပေးသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် နောင်ငါးနှစ်အတွက် အခြေခံပုံလောင်းပေးမည့် လုပ်ငန်းများဟု ရောထွေးနေသည်ကို မြင်ရသည်။ ယခုအ...
Published: 05-17-16 လူပုဂ္ဂိုလ် အမှတ်အသား သရုပ်နှင့် လူမျိုးစု အမှတ်အသား သရုပ်တို့ တိုးတိုက်မိသောအခါ...
Published: 05-17-16 မြန်မာနှင့် စံနှုန်းများ
Published: 05-13-16 ၂၁ ရာစုပညာရေး သို့မဟုတ် ဓားသွေးပြီး အားမွေးထားရမည့်ခေတ်
Published: 05-12-16 MORE SATIRE
တော်လှန်သော တူမောင်သို့ ဦးလေးဗြိမှ ပေးစာ
အေးကွယ်... ငါတူကြီးအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်မယ်ဆို မှောက်သမျှသပိတ် ငါ့သပိတ်၊ တက်သမျှ အစိုးရ တော်လှန်မှ ဆိုတဲ့ သဘောကို ပိုက်ထားရမယ်။ တော်လှန်ရေးသ...
ပညာဒါန သင်တန်းများနှင့် ပညာရေး ဆွေးနွေးပွဲများ
ငွေကြေးတတ်နိုင်သူ လူငယ်တွေအတွက် သင်တန်းတွေတက်ပြီး လေ့လာဖို့ အခက်အခဲ မရှိပေမယ့် ငွေကြေးအခက်အခဲရှိတဲ့ လူငယ်တွေနဲ့ နယ်ဒေသက လူငယ်တွေအတွက် အခွင့်...
အမေရိကန်အစိုးရက မြန်မာအစိုးရပိုင် ဘဏ်များကို စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုမှ ဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းအပေါ် အမြင်များ
“သူတို့နိုင်ငံက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ လာဖို့အတွက်က ဒီနိုင်ငံမှာ Sanction ရှိနေရင် လွယ်လွယ်လုပ်လို့ မရဘူး”...
“သူတို့က ဖုန်းပေါ်ကစာတွေကို အစား စာအုပ်တွေကို ဖတ်နိုင်အောင် ဘာဖြစ်လို့ မလုပ်ပေးကြတာလဲ။ ကော်ဖီဆိုင်တိုင်း လိုလိုမှာ စာအုပ်စင်လေးတွေ ထားမယ်။ စာ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ အဆင်ပြေသော မဟာမိတ်ဖွဲ့
အစိုးရသစ်သည် ပြည်သူတို့ မျှော်လင့်ထားသော အမြစ်လှန် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ခွင့်မပြုသေးဘဲ အထူးသတိထားသည့် လမ်းကြောင်းကိုသာ ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ...
အိမ်ထောင်ရှင်တွေရော လူပျိုတွေပါ မိသားစုနွေးထွေးမှု မရတာဟာ အချိန်မှန် အိမ်မပြန် ကြလို့ပါဘုရား... အချိန်မှန် အိမ်မပြန်ရတာလည်း အပြင်မှာ အချိန်ဖြ...
Popular Posts ဇမ္ဗူဒီပမြန်မာ့အကယ်ဒမီ ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း တည်ထောင်သူ ဦးကျော်မိုးနိုင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Video News ဘယ်လိုမဲပေးကြမလဲ
The Voice Pdf Download Editorial အစိုးရသစ်ကို သွေးတိုးစမ်းမည့် နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး (Daily, Vol-4/No-37)
ပိတောက်နှင့် ချယ်ရီ ဥပမာ (Daily, Vol-4/No-36)
ဖျတ်ခနဲမြင်ရတဲ့ ပဲခူး၊ ရန်ကုန်နဲ့ ပုသိမ် (Daily, Vol-4/No-35)
Opinion အပြောင်းအလဲအတွက် အုပ်ချုပ်ရေး ဝန်ထမ်းကောင်းများ လိုပါသည်